नेपाललाई संसारमा अघि बढाउने हेर्तुले निर्माण भएको र निरन्तर विभिन्न काम गर्दै आएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाइ जापान बाट ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख बैज्ञानिक महाबिर पुन ले आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी दिदै सम्पूर्ण जानकारी र सहयोगीको लिस्ट सार्बजनिक गरेका छन।
खुसि हुदै उनले फेसबुक यस्तो स्टेटस लेखेर जानकारी दिए
हुर्रे – अब खुसीको समाचार सुन्नु होस्:
हिजो जापान बाट कोरोना रोकथामको लागी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनि रहेको बिभिन्न सामानहरु बनाउनको लागी चाहिने पार्ट पुर्जाहरु र सामानहरु नेपाल एअरलाइन्सको फ्लाईट बाट काठमान्डू आइ पुग्यो. ति सामानहरु मध्य मुख्य सामान स्वाब निकाल्ने सुईरो बनाउने 3D प्रिन्टर थियो जसको मुल्य करिब रु.१४ लाख परेको छ. ति सामानहरु किन्नको लागी मैले अमेरिकामा उठेको दान करिब रु. ८ लाख जापान पठाउने र बाँकी रकम जापानमा सापटी अथवा दान लिने भन्ने थियो. तर जापानमा भएका दाताहरुले प्रिन्टर किन्नको लागी मात्र भनेर अनुरोध गरेको रकम भन्दा बढी पनि दान संकलन गर्नु भएको हुनाले अरु धेरै सामानहरु पनि किन्न सकियो. सो काममा NRNA Japan, MRR Japan र अन्य दाताहरुले निम्न अनुसारको कुल जापानिज ¥ 1,927,080 दान गर्नु भएको छ जसको नेपाली रुपैंया करिब २१ लाख ३० हजार जति हुन्छ.
ति सामानहरु जापानमा खरिद गर्नको लागी र प्याकिंग गर्न Subash Gurung ले ५ दिन खटेर काम गरेका छन्. ति सामानहरुलाई टोक्यो बाट नारीता एयरपोर्ट सम्म पुर्याउन बिकास लम्साल भाईले सहयोग गरेका थिए. एयरपोर्टमा पुगे पछि ति सामानहरुलाई जापानिज कस्टम बाट हवाईजहाज सम्म पुर्याउनको लागी ४ जना जापानिज कर्मचारीहरुले ठुलो सहयोग गरेका थिए जसको लागी नेपाली दुताबासले समन्बय गर्न ठुलो सहयोग गरेको थियो. नेपाल एयरलाइन्सले पनि झन्डै १६ ओटा प्याकमा रहेको १६५ के.जी. सामानहरु कत्ति पनि पैसा नलिईकन फ्रिमा काठमाडौँ सम्म ल्याउन मदत गरेको थियो. सामानहरु काठमान्डू आईपुगे पछि एयरपोर्ट बाट छुटाउने काममा NRNA Japan ले ठुलो भूमिका निभाएका थिए. यसरी धेरै नेपाली र विदेशीहरुको सहयोगमा सो प्रिन्टर र अन्य सामानहरु आएको हो.
आज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा त्यो प्रिन्टरको परीक्षण हुँदैछ. त्यो प्रिन्टरको संचालन गर्नको लागी Zener Technologies का भाई Ramchandra Thapa र उनको टीमले मदत गर्नेछन. यसरी बनेको स्वाब संकलन गर्ने सुईराहरु लाई सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगेर प्रमाणिकरण गरिने छ र त्यस पछि सुईराहरु बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदान गरिने छ.
युवा वैज्ञानिक सरोज चेपाङ ४ घण्टा चार्ज गरेर १२० किलोमिटर चल्ने कार बनाउँदै
विदेशी बुहारीलाइ ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय
काेराेना संक्रमितको ज्यान बचाउन सहयाेग गर्ने पहिलो औषधी, डेक्समेथासोन
Previous Article आज आइतबार कुन–कुन राशि भएका व्यक्तिका लागि शुभ ? हेर्नुस
Next Article अमेरिकन डीभी २०२१ को नतिजा सार्बजनिक, यसरि हेर्नुस नतिजा